Wararkii ugu Dambeeyay ee Ganacsiga Caalamiga- Bogga 2 ee 85 - Alietc.com
Dhoofinta Nayjeeriya Ee Qurbajoogta Kordhaysa
Xogta ka soo baxday THISDAY waxay muujineysaa in wax soo dhoofinta Nigeria ee dhanka hawada ay sii ballaartay, inta badanna loo diray dadka reer Nigeria ee ku nool dibadda. Dadka reer Nigeria ee ku nool Qurbaha waxay raadiyaan cunnooyinka wadaniga ah iyo alaabooyin kale, sida uu sheegay Basil Agboarumi, oo ah madaxa shirkadda Skyway Aviation Handling Company. Ku dhowaad dhammaan badeecadaha waxay aadaan Yurub iyo Mareykanka, ayuu yiri, isagoo sheegay waddamada […]Read More
Duulimaadkii Kenya ee Faransiiska ayaa dib loo furay
Shirkadda diyaaradaha ee Kenya airways (KQ) ayaa shaaca ka qaaday barnaamijkeeda ah inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii ay ku tagi jirtay dalka Faransiiska. Waxaa loo qorsheeyay in dib loo furo 17-ka Maarso, duulimaadyada tooska ah waxay ka sii amba qaadi doonaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxayna aadi doonaan garoonka diyaaradaha Charles De Gaulle ee dalka Faransiiska. Iyada oo tikidhada lagu iibinayo qiimaha tartanka, shirkadda xamuulka qaada ee Kenya ayaa dib u bilaabi doonta iyadoo duulimaadkeedu yahay toddobaadkii; ku darista tirooyinka duulimaadka iyadoo kuxiran baahida. Gudaha […]Read More
Michaels Tafaariiqle Ayay U Noqon Doontaa Mid Gaara
Shirkadda Michaels ayaa ku dhawaaqday 2-dii Maarso inay la heshiiyeen Apollo Global Management si ay uga qayb qaataan $ 5 bilyan oo macaamil ganacsi. Codsi ahaan, Apollo wuxuu ku helayaa saamiga Michaels $ 22 halkii saamiyad lacag ah. Shirkadda tafaariiqda farsamada gacanta ayaa mar kale gaar u noqon doonta; sidoo kale waxay ahayd mid gaar loo leeyahay 2006 (waxaa iibsaday Blackstone […]Read More
Aasiya Si Wanaagsan Uga Dambeysa Yurub EV
Xalka Fitch ayaa dhawaan lagu dhawaaqay inkasta oo Shiinuhu uu ka mid yahay kuwa ugu badan ee ka qayb qaata warshadaha korontada (EV), Aasiya ayaa ka dambeysa Yurub. Madaxa Autos Research ee Fitch Solutions, Anna-Marie Baisden, ayaa sheegtay in tani ay ugu wacan tahay in dowladaha Yurub ay qaadayaan tillaabooyin waaweyn oo ay ku ballaarinayaan suuqa EV. Marka laga hadlayo ganacsiga EV ee Aasiya, Shiinaha ayaa yimaada […]Read More
Dhaqaalaha Hindiya oo Kusoo Laabtay
Waxaa jira isbadal deg deg ah oo ku socda dhaqaalaha Hindiya, oo muujinaya soo kabashada, Narendra Modi, lataliyaha dhaqaalaha ee Hindiya ayaa dhawaan sheegay. Tirooyinka dhaqaalaha ayaa soo hagaagay: koror ku yimid sanadki 0.4% sanadki afaraad. Tani waa halka rubuca labaad iyo saddexaad ay arkeen hoos u dhac dhaqaale, 7.3% iyo 24.4% siday u kala horreeyaan. Xiga xogta ugu dambeysa ee GDP, […]Read More
Porsche si ay lacag ugu ururiso Rimac
Qeybta Volkswagen (VW) Porsche ayaa ku biiri doonta fadhiga maalgalinta soo saaraha baabuurta Rimac Automobili si ay u ururiso 157 milyan ilaa $ 181 milyan, sida uu sheegay Mate Rimac. Waxaa loo qorsheeyay in lagu dhameeyo 2 ilaa 3 bilood gudahood, kulan lacag uruurin ah oo cusub ayaa la qaban doonaa dhamaadka 2021, ayuu yiri. Saamiga Porsche ee Rimac Automobili, 15.5%, wuu awoodaa […]Read More
Qorshayaasha Flydubai ee lagu hormarinayo Duulimaadyada Romania
Bisha soo socota, Flydubai Airline waxay adeeg u bilaabi doontaa Cluj-Napoka, magaalada labaad ee ugu weyn Romania. Laga bilaabo 20-ka Maarso, side wuxuu toddobaadkiiba laba jeer mari doonaa inta u dhexeysa garoomada diyaaradaha ee DXB (Dubai) iyo CLJ (Cluj). Shirkadda Duulista Hawada ee Dubai ayaa horeyba duulimaad laba jeer maalintii ah ugu dhexeysa Dubai International iyo Bucharest Tirada duulimaadyada aada Romania waxay gaari doonaan 16 usbuucii guud ahaan sida […]Read More
Faa'iidada degdegga ah ee Etsy
Josh Silverman, oo ah madaxa shirkadda Etsy, wareysi uu siiyay CNBC bishii Febraayo 26 wuxuu ku sheegay in aysan caddeyn waxa 2021 noqon doono sida cudurrada faafa laakiin shirkaddu guud ahaan way ka dheereyn doontaa. Wuxuu sii waday inuu jiray koritaan la taaban karo oo ku saabsan ganacsiga elektaroonigga ah sanadkii la soo dhaafay, iyadoo kororku uu ka badnaa 40% sanadki; iyo Etsy oo maamuley […]Read More
PepsiCo's Cocktail Mixers Oo La Bilaabi Doono Muddo Bil Ah
Nooc cusub, oo loogu magac daray Neon Zebra, ayaa dhowaan ka bilaabmi doona PepsiCo, oo ah shirkadda cuntada iyo sharaabka ee Mareykanka. Hindisaha cabitaanka guriga ayaa bilaabmay laba sano ka hor, ka hor faafida. Isku darka is biirsaday, in ka badan 52 toddobaad oo ku eg 13 Febraayo, waxay arkeen koror ka badan 36% marka loo eego sanad ka hor. Sidoo kale, Shirkadda Coca-Cola ayaa billowday […]Read More
Bartilmaameedka Gaambiya ee 2025 ee Helitaanka Awoodda
Isaga oo ka hadlaya magaalada Brikama oo ku saabsan mashruuca warshad 20MW, madaxweynaha Gambiya Adama Barrow wuxuu sheegay in tiro la ogaan karo oo dadka ka mid ah aysan haysan koronto inkasta oo ay dawladu dadaal u gashay xalinta arinta tan iyo sanadkii 2017. Wuxuu sheegay in dowlada ay siin doonto koronto 685 jaaliyadood. dalka gudihiisa 3da soo socota […]Read More